VZ Navigator ... manana GPS aho ... Ary inona izao ?! | Martech Zone
Talata, Aogositra 28, 2007 Alatsinainy, Aogositra 24, 2009 Douglas Karr
Tantara lava - fohy - tapaka ny findaiko. Ilay azo esorina, miaraka amin'ny fiantohana, dia $ 50 ary ny telefaona misy alàlan'ny GPS vaovao dia 30 $. Lesona nianarana - Tsy hahazo fiantohana an-tariby intsony aho.
Na izany na tsy izany, faly aho fa nahazo telefaona misy GPS. Mariho hoy aho hoe, 'azo atao'. Amin'ny lamaody Verizon Wireless marina, midika izany fa tsy maintsy mandoa vola ianao amin'ny zavatra rehetra sy ny zavatra rehetra. Izy io dia mandrehitra ny fonosana GPS, antsoina hoe VZ Navigator dia $ 9.99 isam-bolana ho an'ny famandrihana. Izaho dia GIS nut ka voatery nanandrana aho.
Hita izany (ary aza misalasala manitsy ahy raha diso aho), mamela ahy hanao zavatra roa ireto:
Jereo aiza Izaho dia amin'ny sarintany an-tserasera izay azoko idirana raha mbola manome alalana ny tenako aho. (huh?) Zahao ny pikantsary etsy ambany… Fantatro fa tao an-trano aho!
Jereo aiza Izaho dia amin'ny sarintany amin'ny findaiko.
Mandefasa telefaona hafa amin'ny toerako amin'ny alàlan'ny hafatra an-tsoratra (ampiharina ny saram-pandefasana) raha tsy miaraka amin'i Verizon koa izy ireo.
Misintona torolàlana avy amin'ny findaiko (tsy avy amin'ny tranokala VZ Navigator). Mora lavitra noho izany ny efijery efa zandriny.
Mitadiava zavatra eo akaiky eo miaraka amin'ny sari-tany amin'ny telefaona (mba ahazoan'i Verizon vola miditra amin'ny dokam-barotra ho an'ity serivisy karama heveriko ity).
Ka… raha maty tao anaty fiara mirehitra nianjera tany amin'ny tanimbary katolika aho tany ho any, 9-1-1 no mety hahita ahy. Na angamba raha lasibatry ny governemanta aho, mety ho hitan'izy ireo aho. Fa ny zanako? Tsia. Tsy hitan'izy ireo aho satria tsy afaka mamoaka ny toerana misy ahy amin'ny toerana mandeha ho azy ivelan'ny serivisy VZ Navigator an'i Verizon.
Verizon… na iza na iza ao amin'ny Verizon… raha mamaky an'ity ianao… maninona ianao no tsy manokatra azy io ho an'ny daholobe?! Raha iriko ampahibemaso ny toerako dia tokony ho afaka nametraka izany imasom-bahoaka aho. Mbola tsara kokoa aza, tokony ho afaka mamorona rindranasa mampiasa azy aho. Mitombo! Amin'ny fanidiana ny teknolojia, tsy hiezaka majika hiresaka amin'ireo namako rehetra handeha hiaraka amin'i Verizon aho mba hahafahantsika mifandefa toerana misy ny sarintany. Mitsangàna!
Fahadisoam-panantenan'ny maro hafa avy amin'ny mpamatsy tolotra ahy. Rahoviana aho no hianatra?
Misaotra soa noho ny ringtone AC / DC, raha tsy izany dia diso fanantenana tanteraka aho.
29 Aogositra 2007 à 12:56
Fandaniam-poana ny GPS, raha tsy ao anaty fiaranao. Manana azy amin'ny findaiko aho ary tsy mbola nanandrana nampiasa azy akory. Vehivavy anefa aho ary fantatro foana hoe aiza aho. TPT
Raha ny momba an'i Verizon dia azoko lazaina aminao fa tsy miraharaha anao izy ireo na ny drafitra novidinao. Ny serivisy mpanjifan'izy ireo dia iray amin'ireo mampihoron-koditra indrindra raha ny momba ny serivisy finday.
Tsy hanosika ny serivisy finday manokana aho fa hilaza izany aho, AC/DC rock!
29 Aogositra 2007 à 3:39
$30? Ny findain'ny zanako vavy dia eo amin'ny fritz, manana Verizon izahay, ary ny finday mora indrindra azoko alohan'ny volana Janoary rehefa manavao ny fifanarahana dia eo amin'ny $140… Tsy mino aho fa lafo ny finday raha tsy tonga ny fotoana hanavaozana ny fifanarahana. Tsy maharitra 2 taona intsony koa ny findainy.
Dia lazao ahy, ahoana no nahazoanao ny telefaona $30?
29 Aogositra 2007 à 7:36
Ny 'fanavaozana maimaim-poana' nataoko dia tamin'ny Desambra. Niditra an-tserasera fotsiny aho, nifidy ny nomeraon-telefaoniko, ary nisafidy ny telefaona fanavaozana ary nomena lisitra aho. Eny, tsy maintsy nanitatra ny fifanarahana aho - nanandevo ny tenako tamin'ireo lehilahy ireo nandritra ny roa taona.
Efa niala tamin'ny AT&T aho ary ny namako rehetra izay manana Sprint dia mankahala azy… ka tsy manana safidy hafa aho.